‘स्पिड ब्रेकर’ हटाउँदै महानगरपालिका, अरु के के गर्दै छ ? - samayapost.com
‘स्पिड ब्रेकर’ हटाउँदै महानगरपालिका, अरु के के गर्दै छ ?
समयपोष्ट २०७४ फागुन ३ गते ६:४८
महानगरपालिकावासीले सडक व्यवस्थापन नहुँदा हैरानी बेहोरेको गुनासो गरिरहेका छन् । स्थानीयवासीको गुनासो सम्बोधन गर्दै महानगरपालिका ट्राफिक प्रहरीसँगको सहकार्यमा सडक व्यवस्थापनमा लागेको छ ।
स्पिड ब्रेकर हटाउने, सडक बत्ती राख्ने, व्यस्त सडक ‘वान वे’ र पर्यटकीय स्थानमा सवारी आगमन रोक्ने काम महानगरपालिकाले गर्दैछ । सडकमा सवारी व्यवस्थापनको काम ट्राफिक प्रहरीको भए पनि संरचना निर्माणको काम स्थानीय निकायको हो ।